Hupenyu huri nani neshamwari dzechokwadi. - Anotungamira - Quotes Pedia
Hupenyu huri nani neshamwari dzechokwadi. - Asingazivikanwe
Hupenyu huri nani neshamwari dzechokwadi, uye ichokwadi! Kunyangwe tiine vanhu vazhinji vakatikomberedza, hapana kana boka revanhu vanotikoshesa mupfungwa yechokwadi. Izvo zvakakosha kuti unzwisise kuti havazi vese vanogamuchira iwe sezvauri!
Hupenyu huri nani kana iwe uine shamwari dzako dzechokwadi dzakakukomberedza, ivo vanovimbisa kugara padivi pako mune zvese zvisinganzwisisike, uye ivo vanonyatso kuzviita kunyangwe zvipingamupinyi zvaunofanira kupfuura nazvo muhupenyu.
Mugwagwa wehupenyu hauna kutsiga, unozadza nekukwira kumusoro, asi kana uine vamwe vanhu vakanaka padyo newe, ndizvo zvinoita kuti unzwe sekunge zvinhu zviri kukufambira.
Usambofa wakasiya shamwari dzako dzechokwadi, uye ita shuwa kuti vanogara vanemi, nekuti ivo vanokupa simba kana iwe uchinzwa wakaderera. Shamwari dzechokwadi dzinoramba dzichitikurudzira nguva dzese kana isu tikatanga kushaya chivimbo mukati medu.
Ndidzo zvikonzero zvatinosimudzirwa nesimba uye positivity zvese zvakare. Hupenyu zvirokwazvo huri nani, uye kana zvisiri, zvinoita sekunge isu tiri nani kana tine vanhu vakadai parutivi pedu.
Paunenge wakakomberedzwa neshamwari dzechokwadi, iwe unoziva kuti uchatove nemusana wavo pakupera kwezuva. Shamwari dzechokwadi hadzisi ivo vanokubatsira iwe mune zvemari, asi ivo ndivo vanomira newe kunyange kana iyo yakaoma dutu ichirovera newe.
Ivo vanhu vanokuda iwe zvauri uye vanokurudzira kuti uite zviri nani zuva rega rega. Ivo ndivo vanotenda mauri kunyange kana nyika yose ichitendana newe.
Vanhu ava ndivo vamwe vaunogona kuitira chero chinhu uye zvese, vasina kana hanya nechero chinhu. Hupenyu huri nani kana uine vanhu vanoshamisa kudaro newe.
Iwe unoziva kuti vanhu ava vaizomira padivi pako kwete kana iwe uchifara uye nepamusoro pebudiriro yako, asi ivo vanozove varipo kuti vakutsigire kana uchinge uchinge uchinge uchinge uine dambudziko.
Hupenyu hunowanda kana iwe uchiziva kuti izvi mweya yakanaka iripo kuti ikutungamirire.
Zvirinani Hupenyu Quotes
Yakanaka Shamwari Quotes
Inzwa Zvirinani Quotes
Nguva Dzakanaka Ratidza Chokwadi Shamwari Quotes
Kurudziro Quotes Pa Hupenyu
Rwendo Neshamwari Quotes
Quotes Pa Ushamwari
Quotes Kuti Uite Kuti Unyemwere Uye Unzwe Zvirinani
Kunakidzwa kweHushamwari Quotes
Chokwadi Shamwari Quotes
Kutaura Kwechokwadi Shamwari
Hushamwari Hwechokwadi Quotes
Yechokwadi Motivational Quotes
Chokwadi Mashoko Quotes
Uchenjeri Hushamwari Quotes
Unganidza ndangariro, kwete zvinhu. - Asingazivikanwe
Ndangariro dzinonaka zvakanyanya kana zera. Izvi zvinoreva kuti hupenyu hwedu hwakazadzwa chaizvo nendangariro dzakasiyana. Ndangariro yega yega…
Haasi madutu ese anouya kuzokanganisa hupenyu hwako, mamwe anouya kuzochenesa nzira yako. - Asingazivikanwe
Iwe unowana akawanda madutu ari kuuya munzira yehupenyu hwako, asi rangarira kuti kwete…
Munhu anonzwa kukosheswa achagara achiita zvinopfuura zvinotarisirwa. - Asingazivikanwe
Munhu anonzwa kukosheswa achaita zvinopfuura zvaanotarisirwa kuti aite! Ehe, izvo zvinomira…
Kuremekedza kuri kune avo vanokodzera, kwete kune avo vanozvikumbira. - Asingazivikanwe
Kuremekedza ndechimwe chezvinhu zvakanakisa izvo munhu anogona kuwana muhupenyu hwake. Kana munhu…
Kupfuura kufunga kunokanganisa pfungwa, kunoparadza mufaro, uye kunogadzira matambudziko asina kana kumbovapo pakutanga. - Asingazivikanwe
Pamusoro pekufunga kunokanganisa pfungwa, kunoparadza mufaro, uye kunogadzira matambudziko asina kana kumbovapo pakutanga.…